Qaybo jaban oo warshad birta ah iyo alaab-qeybiyeyaal ah. Ouzhan
"Red punch" dhab ahaantii waa geedi socod extrusion kulul. Birta birta birta ah ee birta been abuurka u sameysata waxay u baahan tahay inay isticmaasho carbide sibidh ku xiran. Adkaanta karbaydhka sibidhka ku xidhan ayaa ka hooseeya tan carbide ee sibidhka ah, saamayntiisa adkaysiguna way ka fiican tahay tan carbide sibidhka ah. Intaa waxaa sii dheer, carbide shamiito ku xiran oo bir ah ayaa marka hore la shaqeyn karaa ka dibna la demin karaa.
Bir aan firidhneyn oo bir bir ah oo birta been-abuurka ah-birta birta ah uga sameysa qaybo iyo qaybo
Carbide shamiito ku xiran oo bir ah ma aha oo kaliya awood sare, adkeyn, laakiin sidoo kale waxaa lagu shaqeyn karaa makiinado kala duwan iyo ka shaqeynta kuleylka, wuxuuna leeyahay adkeyn sare ee carbide sibidh leh (ka dib markii uu damco iyo xanaaqa, wuxuu gaari karaa (68 ～ 73) HRC, sare iska caabid Sidaa darteed, waxay aad ugu habboon tahay soo saarista wasakhdo kala duwan.Si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay carbide sibidh leh iyo carbide sibidhka ku xidhan oo bir ah ayaa qaali ah oo leh dhabar adayg, waxay ku habboon tahay in la isticmaalo waxyaabaha la gelinayo si ay uga dhex muuqdaan caaryada si loo kordhiyo nolosha adeegga caaryada iyo keydinta Qalabka iyo qiimaha dhimista Sababta oo ah sifooyinka birta birta ah, macaamiil badan ayaa si caadi ah u isticmaalaya birta birta ah si ay qaybo uga sameystaan, faa'iidooyinkiisuna waa iska muuqdaan.
Faa'iidooyinka Ouzhan ahama birta birta shaabadaysan qaybo been abuurtay
- Waxyaabaha kiimikada: Iska caabinta kiimikada iyo u adkaysiga daxalka elektaroolka kiimikada ayaa ah kuwa ugu fiican birta, tan labaadna kaliya aluminiumyada titanium.
- Qalabka farsamada: Marka loo eego noocyada kala duwan ee birta birta ah, aaladaha farsamada ayaa ka duwan. Birta biraha ah ee Martensitic waxay leedahay xoog iyo adkaansho, waxayna ku haboon tahay soo saarida qaybaha u adkaysta daxalka ee u baahan xoog sare iyo iska caabbinta dharka sare, sida fallaadhaha mashiinka hareeraha iyo birta aan lahayn. Mindiyaha, biraha birta ah ee birta ah, iwm., Birta austenitic ahama waxay leedahay baaxad wanaagsan, ma aha awood sare laakiin waa iska caabinta ugu wanaagsan ee daxalka ka dhex jirta birta birta ah. Waxay ku habboon tahay munaasabadaha u baahan iska caabbinta daxalka laakiin aaladaha farsamada oo hooseeya, sida dhirta kiimikada iyo dhirta bacriminta. Qalabka qalabka ee, sulfuric acid, soosaarayaasha acid hydrochloric, iwm, dabcan, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa warshadaha milatariga sida kuwa quusa. Ahama Ferritic ahama waxay leedahay sifooyin dhexdhexaad farsamo iyo xoog hooseeya, laakiin waa iska caabin ah qayilo oo ku habboon qaybaha kala duwan ee foornada warshadaha.
- Waxqabadka geedi socodka: Birta birta ah ee Austenitic waxay leedahay waxqabadka geedi socodka ugu fiican. Sababtoo ah balaastigga wanaagsan, waxaa looga baaraandegi karaa taarikooyin kala duwan, tuubooyin iyo astaamo kale, oo ku habboon ka shaqeynta cadaadiska. Birta biraha ah ee Martensitic waxay leedahay waxqabad habsami u liidasho sababtoo ah adkaansho badan.
- Qaabka abuurista casaanka ah aasaas ahaan kuma koobna qaabka dibadda ee qaybta sheyga laftiisa.
OEM adeegga ahama ahama-Shiinaha Shanghai abuurtay qaybo qaybo ahama soo saaraha
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, waxay ku shaqeyn kartaa birta aan lahayn ee leh qaybo xasiloon oo lagu kalsoonaan karo. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka qumman ee qaybaha birta ah ee birta ah. Intaa waxaa dheer, waxyaabaha la soo saaray ee Forging-ka ah ee alaabada birta ah waxay si adag u waafajinayaan heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Annaguna waxaan ku siin karnaa macaamiisha qiimeynta leh adeegyada qiimaha biraha CNC Forging qaybo qiimo leh.
Codsiga bir birta ah ee birta ah ee shaabadeysan qaybo been abuur ah
Qaybaha birta ah ee aan lahayn ee u baahan wax soo saar ballaaran, been abuur feer cas ayaa loo isticmaalaa wax soo saar ballaaran, keydinta meertada wax soo saarka iyo qiimaha.
Maxay yihiin isticmaalka birta birta ah ee been abuurka ah
304 birta birta ah ayaa si balaaran loogu isticmaalaa qalabka dhismaha iyo qalabka maalinlaha ah, laakiin warshadaha sida xun u wasakheeya ama jawiga badda, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo 316 bir bir ah.
Qaybaha yaryar ee leh shuruudaha sare, foojignimada casaanka ah ayaa loo isticmaali karaa wax soo saar ballaaran, taas oo ku habboon qalabka farsamada iyo baahiyaha maalinlaha ah ee leh qaybo yaryar.
Faa'iidooyinka birta birta ah ee adeegga been abuurka ah
- Dhammaan waxyaabaha been abuurka ah ee alaabada birta ahama waxay ku xiran yihiin baaritaan tayo leh oo adag.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro si loo soo saaro saxan bir bir ah oo Been abuur ah.
Hore: Kaarboonka loo habeeyay qaybo been abuur ah
Xiga: Ahama qaybo ka mid farsamo for steel ahama been abuurtay